Onyinye S-GnRHa N'ihi Ọgwụ (Ovuhom) - China Ningbo Second Ókè mmiri ọgwụ
Operation Manual nke onyinye S-GnRHa maka Ọgwụ
【Common aha】: onyinye S-GnRHa maka Ọgwụ
【English Name】: onyinye S-GnRHa maka Ọgwụ
【Aha Pinyin】: Zhusheyong Fufang Guiyu Cuxingxianjisushifangjisu Leisiwu
【Major mgwa】: S-GnRHa, domperidone
【Pharmacological Action】: Ókè mmiri ọgwụ ọgwụ; S-GnRHa nwere ike kwalite azụ nyak gonadotropic hormone; domperidone bụ a ọgụgụ akwara mbufe ozi dopamine eti ọkpọ nke nwere ike ịkwụsị dopamine si igbochi ntọhapụ nke gonadotropic hormone ma welie azu atọhapụ nke gonadotropic hormone
【Egosi】: Ọ nwere ike na-akpali ndị atọhapụ nke gonadotropic hormone na-eji na-eji ovulation na spermiation maka azụ.
【Ojiji na Ọnụọgụ ọgwụ】: Pectoral nku azu, veutro na intraperitoneal injection; Mix otu karama nke ọgwụ na 10ml mmiri maka igba iji dozie nkwusioru mmiri mmiri; otu ọgwụ maka ahihia azu kaapu, ọlaọcha azu kaapu, bighead na asụsụ Mandarin azụ, na a onunu ogwu nke 0.5ml / n'arọ; otu ọgwụ maka megalobrama amblycephala ọcha azụ nke Taihu Lake, na a onunu ogwu nke 0.3ml / n'arọ; black azu kaapu kwesịrị abụọ injections: 0.2ml / n'arọ nke mbụ ọgwụ na 0.5ml / n'arọ nke abụọ ogwu ogbugba, e nwere 24-48 awa n'etiti abụọ ndị a injections; ike abuo na onunu ogwu maka nwoke azụ.
【Ihe ndị chọrọ nlebara anya】: Fish iji ngwaahịa a na-machibidoro iwu na-eri site na ndị mmadụ
【Nkọwapụta】: S-GnRHa 200μg + domperidone 100mg
【Ngwugwu】: Ọ na-juru n'ọnụ na penicillin karama, 10 karama kwa igbe
【Nchekwa】: Kaakwa ya akara tightly, ma na-na jụụ, ebe ndị gbara ọchịchịrị
Previous: Onyinye Gonadotrophin maka Ọgwụ (Ovumon)
Osote: Domperidone Ọgwụ
onyinye Gonadotrophin N'ihi ọgwụ (Ovumon)
homonụ N'ihi Fish ozuzu Ovaprim
Ovaprim Ọgwụ Fish ozuzu Ókè mmiri ọgwụ N'ihi azụ okpo
Oxytocin Ọgwụ Animal Ókè mmiri ọgwụ
Spawn Medicine homonụ N'ihi Fish Breeding Ovaprim
akpata Fish Ókè mmiri ọgwụ
trout Ugbo homonụ N'ihi Fish ozuzu Ovaprim
Adress: Chengdu, Sichuan n'ógbè, Shuxihuanjie # 61528 # RENJIAN Rd, ZONGHAN ST, CIXI, Zhejiang, CHINA